Izifutho hoses ngoba amanzi kuyinto tube lukathayela of izinga ekhethekile insimbi engagqwali. Ilungiselelo elinjalo Kuyinto elula kakhulu, kodwa kufanele sikhumbule ukuthi akuyona njengoba nezimo kunensimbi iraba hose. Izifutho liner esetshenziswa ukuxhuma amanzi, air conditioning, igesi kanye amapayipi zalapho ezifana echibini, eshaweni, abakhwabanisi ethangini. amapayipi amanzi Nezimo ku amapayipi amanzi ezifakiwe esigabeni lokugcina umsele, bajoyine imigqa kumadivayisi nge lapho umsebenzisi baxhumana.
Izinto zesimanje emakethe linikeza kukhethwa inqwaba Izifutho podvodok ezivela abakhiqizi ezahlukene, okuyinto zingafani isigaba intengo, tinkhulumo, injongo ukusebenza, umbala, isayizi, izinga, kanye nesikhathi. Lezi hoses kukhona elula kakhulu ekuphileni kwansuku zonke futhi uhlale lidumile abathengi. Manje ungakwazi ukukhohlwa ngokuphepha mayelana akusebenzi metal amapayipi. Cishe njalo ngesikhathi ukulungisa noma uthuthukise amapayipi esetshenziswa Izifutho hoses ngoba amanzi. Izibuyekezo Customer alamathuluzi omuhle kuphela. Nge ukusetshenziswa kwezinto eziphinde zisebenziseke izinga ngasendleleni ukunweba zonke izinkinga zansuku zonke.
Okokuqala, kufanele acabangele izinga ezisetshenziswa ngumkhiqizi womshini liner. Kuwufanele sokunaka imikhiqizo ngokuqinile isiNtaliyane, eyenziwe, eliqinile high quality materials, aluminium kanye insimbi engagqwali. Ukuhlinzekwa abakhiqizi abaningi, nokusebenza okuhle lobuchwepheshe, intengo imali. Abanye abakhiqizi ukuthuthukisa anti-vibration liner kokuba ububanzi esikhulu futhi aqede umsindo hum uma uxhumeke zasendlini. Amadivayisi anjalo abanalo analogue emakethe yasekhaya.
Abenzi eyinhloko podvodok enjalo yizimpawu zokuhweba Witzenman, Pagri, G-Beka futhi Hydraflex. Uma kubhayela isetshenziswa yokugezela noma yimuphi omunye amapayipi, hhayi ukugwema khona kumadivayisi ziyoba sobala. Ezimweni ezinjalo, kunconywa Izifutho ezambiwa Hydraflex amanzi. Imikhiqizo yale nkampani has a ukubukeka yesimanje Lihle umphelelisi design yobuhle yokugezela.
liner okunjalo nakanjani eliphezulu futhi ifeze amakhasimende isikhathi eside kakhulu kuneminyaka hoses ezivamile. Lezi amadivayisi ingasetshenziswa ngamanzi abandayo futhi amanzi ashisayo. Kumele kukhunjulwe ukuthi izindleko nokuphathelene liner izikhathi eziningana ephakeme kunokuvamile.
Senhlobo ezihlongozwayo Kunconywa ukuba bathanda hoses lapho nut kufaneleka ezenziwe ngensimbi austenitic, nethusi kusukela izinga liphansi kakhulu. Uyawubona lo impahla kungabangwa imifantu futhi nezakhamuzi. I umphetho phakathi ingxenye Helical kanye efanelekayo kufanele yenziwe argon-arc Welding, hhayi zavaltsovyvaniya njengoba ku liner ezibaziweyo. amnyama - iyona nokugqwala, nomumo oyindilinga kakhulu amalunga kusikisela kungathembeki waso nokuthambekela kwento namachibi. welds Good unephrofayela mncane futhi bushelelezi, futhi musa ihluke ngombala kusukela hose.
Qualitative amanzi ezambiwa Izifutho ayinakho nezakhamuzi, izigqebhezi ezisetshenziswayo zokudlala noma ukugqwala izindawo. Ukuba khona kwabo kufakazela ukuthi ukusetshenziswa ongaphakeme-ebangeni steel. Kuthathwa kuwuphawu lwamandla abampofu metal. ezambiwa Okuvikelwe ngokuvamile camera nge ifilimu PVC. Umehluko phakathi imikhiqizo igesi namanzi ngokuvamile iningi lemiklamo rigidity ngenxa ukuxhumana ukubala nge ingcindezi ucishe. It iyenziwa i abavamile elula hose.
abakhiqizi abaningi ngokusemthethweni ukuqinisekisa ukuthi amapayipi amanzi abo izothatha iminyaka engu-15. Okuhle Izifutho hoses ngoba amanzi "Akvaprof", isibonelo, kalula kudlalwe iminyaka 30-35, ngenkathi onga izindlela wokusebenza, futhi leli nani sisalokhu mahlanu. Esaphila futhi kuncike impahla efanelekayo. Isikhathi esincane isevisi kugunyazwe ebonwe amaseli kusuka carbon lensimbi lethusi. Nuts insimbi engagqwali kukhona isikhathi eside kakhulu uma iqhathaniswa nezinye izinto.
Umklamo kwenza kube nokwenzeka ukusonta hose Kuvunguza bese ugoba ngesikhathi esifanayo kuzoqoshwa. Ikhwalithi ephezulu Bellows hoses ngoba amanzi ezenziwe ngensimbi engagqwali kungenziwa welulela ubude ngaphandle ingozi by izikhathi 1.5-2. Ngenxa rigidity isakhiwo lukathayela nge ubukhulu bayo akumelwe ziyahlukahluka. Ukukhetha hose, ungacela umdayisi ukuza liner noma buyela yimuphi umthwalo kuso.
Modern Izifutho hoses ngoba amanzi kwenza kube nokwenzeka ukuba ngokushesha afeze ukufakwa ware enelanga, ezihlukahlukene imishini amanzi, igesi kanye Ukushisa imishini ezindaweni akude kakhulu ezweni, cottage, efulethini, noma ehhovisi. amapayipi amanzi qualitative babe okusezingeni eliphezulu ukusebenza lobuchwepheshe, anti-vibration izakhiwo kanye kubalulekile ukuze inhlangano induduzo noma iliphi igumbi. Emangazayo izakhiwo yobuhle podvodok nezimo ukunikeza ithuba ukugqamisa stylish efulethini ingaphakathi noma ehhovisi.
Yini ehlukanisa Izifutho hoses ngoba amanzi kusukela metal amapayipi?
amapayipi Long ajwayelekile yensimbi esetshenziswa kancane. Uma uxhuma amanzi, heater, bidet, namanye amadivayisi ngokwethukela kusetshenziswa Izifutho hoses, eyenziwe zepulasitiki, iraba nensimbi. amapayipi amanzi ezinjalo nezimo kakhulu amanzi, akusho nokugqwala, futhi amelana abezindaba nolaka, kanye nokushintsha kwamazinga okushisa, ine bempilo anda.
Hose liyisici esibalulekile we Izifutho liner. It kungenziwa akhiwe ngerabha non-enobuthi amamaki ezehlukene kanye nezinye izinto. Izingxenye letisetjentisiwe kufanele tilungele imvelo, ingeyona ezindongeni compounds eziyingozi kanye ongakwazi ukumelana namazinga okubanda kuqhathaniswa eliphezulu. Rubber hoses avikelekile ngaphandle insimbi engagqwali aluka, aluminium kanye nezinye izinto, Bellows hoses emanzini awuzange bachayeka emathonyeni okungamhloniphi mechanical kwadingeka amandla sezingeni eliphezulu.
Zonke izici yokuxhuma - nokufakwa, amantongomane ngophawu, iphini ngaso sonke isikhathi kufanele yazalwa ngokwanele high quality materials.
Kukanjani Izifutho hoses ngoba amanzi
Izibuyekezo abasebenzisi eziningi ezifakazela malula futsi kalula ukufakwa hoses. master Novice ngeke kube nzima ukuqonda inqubo yokufaka. Ukukhweza i Izifutho liner iqala ukususwa ipayipi izakhiwo. Kuphethe imisebenzi eduze imithombo ukushisa nokubanda ngaphansi kwamazinga okushisa aphansi ke akuvumelekile. Liner ngoba amanzi kufanele ngokucophelela zicatshangelwe Kinks, amajika, noma ezinye umonakalo. Esebenzisa valve akhethekile hoses ezinjalo kungenziwa oxhumene.
Udinga ukuqinisekisa ukuthi konke ivaliwe ngesikhathi amalunga omzimba. Zonke Izifutho hoses ukuba engagqwali amanzi njalo emva kwezinyanga eziyisithupha kufanele kuhlolelwe ukuvuza.
Amapayipi ngoba imishini yokuwasha
Ngo mingaki imizi yesimanje noma emahhovisi setha imishini yokuwasha, imishini yokugeza izitsha, emoyeni conditioners, heater amanzi kanye nezinye zikagesi zasendlini. Ukuxhuma amadivaysi njalo adinga efanelekayo Bellows hoses nezimo ukuze ithole amanzi. Abakhiqizi ukunikeza ephelele ne standard amasu hoses akukho kuka 1.5 amamitha ngobude.
Uma kudingekile, omunye ungakwazi ukuthenga liner bangempela. imikhiqizo Italian okuye kwenziwa kuye kwabonisa indlela engcono kakhulu. It has amandla sezingeni eliphezulu futhi ukushisa ukumelana. Podvodok production ezifuywayo emakethe okwamanje.
Abaningi okukhethekile ezitolo noma ngithenga kuyi-imibukiso Inthanethi Bellows hoses ngoba amanzi. Izibuyekezo imikhiqizo uthenge, amakhasimende kwesokunxele, kusikisela ukuthi kubonelelwa kakhulu ama-iningi abakhiqizi isiNtaliyane, naphezu okusezingeni eliphezulu kumadivayisi izindleko. Esikhathini esitolo inthanethi ukuthenga Izifutho liner elusizo kakhulu.
Uyini umphumela yokufuna amadivayisi eliphansi?
Ukuthenga liner Izifutho kusukela abahlinzeki alithembekile ongakhonza izinkinga eziningi ngesikhathi ukusebenza. amadivaysi eliphansi abe esifushane kakhulu isikhathi sokuphila, futhi uhlelo kudinga ukuhlolwa njalo.
Ezambiwa Izifutho yalolu hlobo kufanele esikhundleni esisha izinyanga eziyisithupha ngemuva kokufaka. Kukhona awokuthi hose engaphelele wavele, futhi amanzi ngeke iyangena efulethini, batholakala esitezi esingezansi. Yiqiniso, khona-ke kufanele ukhokhe ukuze kulungiswe.
Uma ufaka yonke eyayike yaba khona amanzi metal amapayipi awasasetshenziswa namuhla. Ukuze esikhundleni ubudala weza, amadivayisi lula nezimo ukuthi kulula ukuze ujoyine nokubukeka tebuciko, okuhlala, izinga kanye nokwethembeka.
Incubator "Kvocka": imfundo, intengo kanye nokubuyekeza. Household incubator ne flip othomathikhi
Kanjani ukuba ishintshe kusuka MTS "Vodafone"? Imiyalelo, amazinga, izibuyekezo
Endometrium by umjikelezo usuku uhla evamile esimweni ngeziphambeko kuwo
Vins Von: Filmography. Uhlu amabhayisikobho best nge Vince Vaughn
Paraovarialnaya simila: Ubangela, Izimpawu kanye Ukwelashwa Izindlela